सम्पादकीय Archives - Page5of5- NepalPatra.com
वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन गर !
नेपालपत्र, ७ वैशाख २०७५ । नेपालमा एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय दुवै उडान हुँदै आएको छ । आज मालिन्दो एयरको जहाज धावनमार्गबाट बाहिर जाँदा करिब १३ घण्टासम्म आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण प्रभावित बन्यो । वैकल्पिक विमानस्थलको अभावका कारण आजको समस्या सृजना भएको हो । नत्र […]
सिन्डिकेटविरुद्धको सकारात्मक कदम
नेपलपत्र, ६ वैशाख २०७५ । सरकार देशभरी रहेको यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको लागि अग्रसर भएको छ । सीमित व्यक्ति वा समूहको अधिनमा रहेको सिन्डिकेट अब हट्ने सकारात्मक संकेत देखिएको छ । सरकारको यो कदमले यातायात क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै हाल कायम रहेका विकृतिको अन्त्य हुनेछ । सरकारले ‘रुट निर्धारण निर्देशिका’ जारी गरेसँगै यातायात […]
विद्यार्थी भर्ना अभियान सार्थक बनोस !
नेपलपत्र, ५ वैशाख २०७५ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि शिक्षक, सरकारी कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधिहरुले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु पर्ने विषयले चर्चा पाइरहेका बेलामा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरेर अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । “एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, सुनिश्चितता र सिकाईको स्थायित्व” भन्ने नारासहित यो अभियान सरकारले संचालन […]
जनताको आदेश सम्मान गर !
नेपलपत्र, ४ वैशाख २०७५ । एमाले – माओवादी एकता हुने विश्वास जनताले गरिरहेका छन् । दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भए भने राजनीतिक स्थिरता हुन्थ्यो र स्थिर सरकारले जनताको जीवनस्तर सुधार हुने केही काम गर्नेथियो भन्ने जनताको चाहना देखिन्छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रवीच प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव हुनुभन्दा केही अगाडि नेपाली जनतालाई खुसी पार्नेगरी […]